တရုတ်ပြည်သူ့ဘဏ် Digital Money Institute နှင့် မြန်မာသနပ်ခါးအုပ်စုတို့ ပူးပေါင်း၍ ဒစ်ဂျစ်တယ်ယွမ်ငွေပလက်ဖောင်းတည်ဆောက်မည် – Pandaily
တရုတ်ပြည်သူ့ဘဏ် Digital Money Institute နှင့် မြန်မာသနပ်ခါးအုပ်စုတို့ ပူးပေါင်း၍ ဒစ်ဂျစ်တယ်ယွမ်ငွေပလက်ဖောင်းတည်ဆောက်မည်
Apr 26, 2021, 15:22ညနေ 2021/04/26 20:14:12 Lucia Si
ဧပြီ ၂၅ ရက်က ထုတ်ပြန်သော “တရုတ်သတင်း” အစီရင်ခံစာအရ စတုတ္ထအကြိမ်မြောက် တရုတ်ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲအတွင်း တရုတ်ပုရွက်ဆိတ်အုပ်စုနှင့် တရုတ်ပြည်သူ့ဘဏ် ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးအင်စတီကျူ့ဒ်တို့က မဟာဗျူဟာပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေးသဘောတူစာချုပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီး ယမန်နှစ်က ဒစ်ဂျစ်တယ်ယွမ်နည်းပညာပလက်ဖောင်းကို မြှင့်တင်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။
Platform Architecture database ကို Oceanbase and mobile development platform MPaS မှာ ဖွနျ့ဝပေေးမှာ ဖွဈပါတယျ။ OceanBase က သညျပုရှကျဆိတျအုပျစုဟာ ကမ်ဘာ့ပထမဆုံးဖှံ့ဖွိုးရေးလုပျငနျးဖွဈတဲ့ ကိုယျပိုငျငှရေေးကွေးရေးအမာခံစီးပှားရေးကိုဖွနျ့ဝပေေးတဲ့ဒတောဘစျေ့ဖွဈပါတယျ။ MPaS မှ ငှပေေးခရြေနျဖိုးရှိသော Mobile Development Platform ဟု အမညျပေးထားသညျ့ သနပျခါးအုပျစုသညျ ပလကျဖောငျးပျေါတှငျ အခွခေံ၍ မိုဘိုငျးဖုနျး ဖှံ့ဖွိုးရေးလုပျငနျးမြားကို လုပျဆောငျပေးနိုငျပွီး One-Stop Solutions ဖွငျ့ စမျးသပျလညျပတျနိုငျမညျဖွဈသညျ။
သနပ်ခါးအုပ်စုသည် နည်းပညာနယ်ပယ်တွင် နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း ဖလှယ်မှုအားကောင်းစေရန် ဆက်လက်ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပြီး နည်းပညာအသစ်များကို ဒစ်ဂျစ် တယ်နည်းပညာတွင် အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း၊ ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းများကို လက်တွေ့ကျကျ ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်သည်။
မကွာသေးခငျက တရုတျပွညျသူ့ဘဏျဟာ ဒဈဂဈြတယျငှကွေေးနဲ့ ပတျသကျပွီး သုတသေနတှကေို အရှိနျမွှငျ့လုပျဆောငျခဲ့ပွီး နိုငျငံအနှံ့မှာ ရှပွေ့ေးလုပျငနျးမြိုးစုံကို လုပျဆောငျခဲ့ပါတယျ။
ဧပြီ ၁၂ ရက်က တရုတ်ပြည်သူ့ဘဏ် မက်ခရို၏ အထိုက်အလျောက် မူဝါဒရေးရာ ဗျူရိုအကြီးအကဲ လီဘင် ဒီဂျစ်ယွမ်က ဘေဂျင်းမြို့ ၁၀ မြို့တွင် ဆောင်းရာသီ အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲအတွက် ရှေ့ပြေးအဖြစ် တည်ရှိ ကြောင်း ပြောကြားသည်။ ဧပွီ ၁၈-တရုတျပွညျသူ့ဘဏျရဲ့ ဒုတိယအုပျခြုပျရေးမှူး လီဘိုက သူတို့တညျဆောကျမယျ့ ဒဈဂဈြတယျယှမျရဲ့ အခွခေံအဆောကျအအုံဟာ ဂဟေစနဈကိုကောငျးမှနျစပွေီး စနဈရဲ့ဘေးကငျးစိတျခရြမှုကို တိုးမွှငျ့ပေးမှာဖွဈပါတယျ။
၂၀၁၄ ခုနှဈတှငျ တရုတျပွညျသူ့ဘဏျမြား အထူးပွုအဖှဲ့ကို ဖှဲ့စညျးခဲ့ပွီး ဒဈဂဈြတယျငှကွေေး ဖွနျ့ခြိရေး မူဘောငျ၊ နညျးပညာ၊ ဖွနျ့ဖွူးရေး ပတျဝနျးကငျြဆိုငျရာ စသညျတို့ကို လလေ့ာခဲ့သညျ။
ပုရှကျဆိတျအုပျစုမှာ ရှပွေ့ေးစီမံကိနျးမှာ ပါဝငျခဲ့တဲ့ ဒဈဂဈြတယျယှမျပေါငျးမြားစှာလညျး ပါဝငျပါတယျ။ ခိုင်မာတဲ့ စာရင်းတွေအရ My Bank– Digital ယွမ်ငွေအော်ပရေတာ တစ်ခုဟာ ၂၀၁၇ ခုနှစ်ကစပြီး Digital ယွမ်ငွေနဲ့ စတင်ပါဝင်လာပြီး သုတေသနပြုမှုတွေမှာတော့ မြင်းတွေ၊ ကုန်သေတ္တာတွေ၊ မြင်းတွေ၊ ဆံပင်တွေ၊ ကြောင်တွေ၊ စူပါမားကတ်တွေ၊ Hebit စက်ဘီးတွေ၊ ရှန်ဟိုင်း ဘတ်စ်ကားတွေနဲ့ တခြားကုမ္ပဏီပေါင်းများစွာကို ရှေ့ပြေးစမ်းသပ်မှုတွေ လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။
ရှန်ဟိုင်း ဒုတိယငါးဈေးပွဲတော်တွင် နိုင်ငံပိုင်ဘဏ် ခြောက်ခုမှလွဲ၍ ကျန်ငါးဘဏ်ကို ပြင်ပတွင် သယ်ဆောင် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ပါဝင်သူများကို ငွေပေးချေရာတွင် PayPal Digital Line နှင့် Online Line တို့မှတစ်ဆင့် ငွေပေးချေနိုင်ပြီး Digital ယွမ်ငွေကိုလည်း အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ထိုက်ထိုက်သည် Beijing Dong နည်းပညာကုမ္ပဏီနှင့်အတူ တရုတ်ပြည်သူ့ဘဏ် Digital Money Institute နှင့် Strategic Strategies တို့ ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ သူတို့အဖှဲ့ဟာ နညျးပညာဆိုငျရာ ဝနျဆောငျမှုတှကေို အခွခေံတဲ့ လုပျငနျးတဈခုဖွဈပွီး အစိုးရနဲ့အခွားအဖှဲ့အစညျးတှရေဲ့ brand ဖွဈတဲ့ Beijing Digital Mobile Application ကို ၂၀၂၀ ခုနှဈ စကျတငျဘာလကနေ စတငျပွီး ပူးတှဲမွှငျ့တငျမှာ ဖွဈပါတယျ။
Topics: မွငျကှငျး78:Chinese Digital Money Electronic Payment (DCEP) အိပျမကျမြား
ဇနျနဝါရီလက စတငျခဲ့တဲ့ ဘဂေငျြးဟာ ရှနျဟိုငျး၊ ရှနျကနျြး၊ ခနျြဒူး၊ ရှနျးရှနျးစတဲ့ နရောငါးခုမှာ ဒဈဂဈြတယျယှမျငှေ ပေးဆောငျခဲ့ပါတယျ။ ယင်းနေရာများတွင် နေထိုင်သော ဝန်ထမ်းများသည် ဒစ်ဂျစ် တယ်လစာငွေသွင်းနိုင်ပြီး လူတစ်ဦးချင်း အကြွေးဝယ်ကတ် (သို့) ဂျီဒီယွန် သုံးစွဲမှုကို လက်ခံသော ဘေဂျင်းမြို့တော်နှင့် အ စည်းအဝေးတွင် အေဂျင်စီများက လက် ခံသည်။
Beijing Dong မှာလညျး ဇနျနဝါရီလမှစတငျကာ ဒဈဂဈြတယျယှမျကို အသုံးပွုကာ ရောငျးခသြူနှဈဦးကို လိုငျးဖွတျပွီးငှပေေးခရြေပါတယျ။ တရုတျနဲ့နီးစပျတဲ့ စီကငျြးဒေါငျနညျးပညာဘဏျနဲ့ ပူးပေါငျးပွီး ဒဈဂဈြတယျယှမျကို မွနျမွနျဆနျဆနျမွှငျ့တငျပေးဖို့အတှကျ ဒဈဂဈြတယျပိုကျဆံအပလီကေးရှငျးကို ထပျမံခြဲ့ထှငျခဲ့ပါတယျ။
တရုတျဗဟိုဘဏျ တာဝနျရှိသူမြားကို ဒဈဂဈြတယျငှကွေေး ကွီးကွပျမှု တိုးမွှငျ့ရနျ နိုငျငံတကာအသိုငျးအဝိုငျးတိုကျတှနျး
တရုတ်ပြည်သူ့ဘဏ် (PBOC) မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးကမူ တရုတ်ပြည်သူ့ဘဏ် သည် ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးကို နိုင်ငံ တကာတွင် ပိုမိုအားကောင်းသော စီမံခန့်ခွဲမှုများ ဆောင် ရွက်ရန် တိုက်တွန်းသည်။
အားပြိုင်မှု အားကောင်းလာမှုကြောင့် Fire Dollar Mall နှင့် BTC. Top လုပ်ငန်းများ ရပ်ဆိုင်းထားရကြောင်း Warning Business
တရုတ်ငွေလျှို့ မိုင်းကုန်သည်များက Fire mall (Hubi Mall) နှင့် Bitcoin (BTC. Top) တို့ကို တနင်္ဂနွေနေ့တွင် ကြေညာခဲ့ပြီး ၎င်းတို့သည် တရုတ်ပြည်တွင်းသို့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ရပ်ဆိုင်းထားခဲ့ကြောင်း၊ ယခင်က တရုတ်ပြည် တွင်း၌ Bitcoin Mays များနှင့် ကုန်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းများ မြင့်တက်လာပြီး တရုတ်ကုန်သည်များကို နှိမ်နင်းရာမှ လျှို့ ဝှက်ငွေကြေးဈေးကွက်သို့ ထိုးကျသွားကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
တရုတျလူမြိုး Bitcoin Migrant ရဲ့ Password ကို နှိမျနငျးနတောတှလေညျး
တရုတျပွညျ တှငျးမှ နှငျထုတျခံရသော ဘဈဒင်ျဂါးမိုငျးလုပျသားမြားသညျ ရှငျကနျြးနှငျ့ ယူနနျပွညျနယျမှ ဘဏ်ဍာရေးနှငျ့သဘာဝပတျဝနျးကငျြဆိုငျရာ မူဝါဒမြား ပိုမိုတငျးကပျြလာနသေညျ။ အခုနောကျပိုငျးတော့ စီခြှမျဆိပျကို ဘယျသှားသှား ဘယျသှားသှား ဘယျသှားသှား ဘယျသှားသှား?
Industry Jul 02 ဇူလိုငျ 2, 2021
Industry Aug 04 ဩဂုတျ 4, 2021